Adepts, Masters ary Mahatmas
Fanadihadiana momba ny fikarohana, Masters ary Mahatmas fanontana
Rehefa mandeha ny ala i ma, mbola ho ma ma; Fa izaho dia hiray saina amin'ny fahatahorana ary ho mahatam-ma.
Vol. 9 JULY, 1909. Tsia
IZANY teny dia nampiasaina tamin'ny ankapobeny nandritra ny taona maro. Ny roa voalohany dia avy amin'ny teny latina, farany avy amin'ny Sanscrit. Ny adept dia teny iray efa nampiasaina nandritra ny taonjato maro ary nampihatra tamin'ny fomba maro. Izy io anefa, dia nampiasaina tamin'ny fomba manokana nataon'ny alchemista haino aman-jery, izay nampiasa ilay teny, dia midika fa olona nahatratra ny fahalalana ny zava-kanto alikaola, ary nahay tamin'ny alikaola. Amin'ny fampiasana mahazatra, ny teny dia nampiharina tamin'ny olona nahay tamin'ny fahaizany na ny asany. Ny teny hoe master dia efa nampiasaina hatramin'ny taloha. Avy amin'ny magro Latina, mpanapaka, ary nampiasaina ho lohateny hanondroana olona nanana fahefana ho an'ny hafa noho ny asa na fahefana, amin'ny maha-lohan'ny fianakaviana, na amin'ny maha mpampianatra azy. Nomena toerana manokana amin'ny fanafoanana ny alchemist sy rosicrucians tamin'ny fotoanan'ny haino aman-jery izany hoe midika ho lasa lasa tompon'andraikitra ny foto-keviny, ary mahay mitantana sy manome toromarika ny hafa. Ny teny mahatma dia teny Sanscrit, ny dikan'ny hoe fanahy lehibe, avy amin'ny maha-lehibe, lehibe, ary atma, fanahy, efa an'arivony taona maro. Tsy nisy nampidirina tamin'ny fiteny Anglisy ihany anefa izy io tato ho ato izay, saingy mety ho hita amin'ny lexika.
Ny teny mahatma dia ampiharina eo amin'ny firenena niaviany ary koa na iza na iza no raisina ho lehibe amin'ny fanahy toy ny indrainy sy ny raokista. Amin'ny vanimpotoana, ny teny dia matetika no ampiharina amin'ireo izay heverina fa nahatratra ny ambaratonga farany ambony indrindra. Noho izany dia efa nampiasaina an-jatony sy an'arivony taona maro ireo teny ireo. Misy dikany manokana nomena azy ireo tao anatin'ny dimy amby telopolo taona lasa.
Hatramin'ny nananganana ny Theosophical Society ao 1875 any New York nataon'i Madam Blavatsky, ireo teny ireo, tamin'ny alàlan'ny fampiasany dia nahatonga ny heviny manokana sy manan-danja kokoa noho ny teo aloha. Madam Blavatsky dia nilaza fa nanoro hevitra azy, tompo na mahatmas mba hanangana fiaraha-monina ho fampahafantarana an'izao tontolo izao ny fampianarana sasany momba an'Andriamanitra, ny natiora sy ny olombelona, ​​izay fampianarana tsy hadinon'izao tontolo izao na tsy fantany. Madam Blavatsky dia nanambara fa ny fanekena, tompo sy fahatsiarovana izay nolazainy dia olona nanana ny fahendrena avo indrindra, izay manana fahalalana ny lalàn'ny fiainana sy ny fahafatesana, ary ireo zava-misy amin'ny natiora, ary izay afaka mifehy ny herin'ny natiora ary mamorona zava-misy arakaraka ny lalàna voajanahary araka izay niriany. Nilaza izy fa ny Atsinanana sy tompo sy fahatsiam-pahalalana azony avy any Atsinanana no misy azy, fa any amin'ny faritra rehetra manerana izao tontolo izao, na dia tsy fantatry ny olombelona amin'ny ankapobeny aza. Ankoatr'izay dia nambaran'i Madam Blavatsky fa ny olona rehetra, ny tompony ary ny mahatmas dia olona na lehilahy avokoa, izay nandritra ny taona maro sy ny ezaka mitohy dia nahomby tamin'ny fifehezana, ny fanjakazahana ary ny fifehezana ny toetrany ambany ary izay nahavita sy nanao hetsika araka ny fahalalana ary fahendrena izay efa azony. Ao amin'ny Theosophical Glossary, nosoratan'i Madam Blavatsky, dia hitantsika ireto manaraka ireto:
"Zatra. (Lat.) Adeptus, 'Izay nahatratra.' Ao amin'ny asa fanalam-barotra izay efa nahatratra ny dingana voalohany, ary lasa Master amin'ny siansa filozofisma Esoterika. ”
"Mahatma. Lit., 'fanahy lehibe'. Drafitra baiko avo indrindra. Ireo olona nanan-talenta izay, rehefa nahatratra ny fifehezana ny fitsipiky ny ambany dia noho izany dia miaina tsy voapentin'ny 'olombelona nofo', ary manana fahalalana sy hery mifanaraka amin'ny sehatra nahatratrarany ny fivoaran'ny ara-panahy. ”
Ao anatin'ireo boky «Theosophist» sy "Lucifer" talohan'ny 1892, nanoratra betsaka momba ireo adasters, master ary mahatmas i Madam Blavatsky. Hatramin'izay dia nisy literatiora be dia be natsangana tamin'ny alàlan'ny Theosophical Society ary nampiasana ireo fomba maro ireo. Fa i Blavatsky no manam-pahefana sy vavolombelon'izao tontolo izao raha ny amin'ny fisian'ireo zavamanana izay nolazainy ho toy ny adres, masters ary mahatmas. Ireo teny ireo dia nampiasain'ny teôsôista sy ny hafa amin'ny heviny hafa noho ny dikany nomen'i Blavatsky. Amin'izany no horesahantsika manaraka. Ireo rehetra ireo anefa izay nifandray taminy sy nanaiky ny fotopampianarana nomena azy ary izay niteny avy eo ary nanoratra taty aoriana momba ny fambara, niaiky ireo tompo sy mahatmas nahazo azy ireo ny fahalalana azy ireo. I Madam Blavatsky tamin'ny fampianarany sy ny asa sorany dia nanaporofo ny loharanom-pahalalana sasantsasany izay niandohan'ny fampianarana izay fantatra amin'ny anarana hoe theosophical.
Raha nanoratra momba ny fanekena, tompo sy mahatmas i Madam Blavatsky sy ireo izay nahazo ny fampianarany, dia tsy nisy fampahalalana mazava na mivantana mivantana momba ny dikan'ny tsirairay izay manavaka ireo teny hafa ireo, na momba ny toerana sy ny dingana izay noforonin'ireny olona ireny ny evolisiona. Noho ny fampiasana ny voambolana nataon'i Madam Blavatsky sy ny Theosophical Society, ireo teny ireo avy eo dia noraisin'ny olon-kafa izay, miaraka amin'ireo teôsôfista maro, dia mampiasa ireo teny hoe mitovy endrika sy amin'ny fomba misafotofoto ary tsy manaja. Ka mila fampahalalana tsy mitsaha-mitombo hatrany hoe iza sy ireo dikan'ny teny hoe: aiza, aiza, oviana ary ahoana, ny zavaboary izay soloin'izy ireo.
Raha misy karazana atahorana, tompo sy mahatmas, dia tsy maintsy mihazona toerana sy ambaratonga fivoarana amin'ny fivoarana izy io, ary io toerana sy dingana io dia tsy maintsy hita ao amin'ireo rafitra na drafitra mifandraika amin'Andriamanitra sy ny natiora. Misy rafitra iray izay nateraky ny natiora, ny drafitra napetraky ny olona. Ity rafitra na drafitra ity dia fantatra amin'ny hoe zodiak. Ny zodiaka izay resahintsika kosa dia tsy antokon-kintana any an-danitra fantatra amin'ity fehezan-teny ity, na dia ireny antokon-kintana roa ambin'ny folo ireny aza dia maneho ny zodiakolontsika. Ary tsy miresaka momba ny zodiak amin'ny heviny izay ampiasain'ny mpanandro maoderina. Ny rafitry ny zodiaka izay iresahantsika dia naseho tao amin'ny fanontana maro izay niseho tao amin'ny "The Word."
Hita amin'ny fizahana ireo lahatsoratra ireo fa ny zodiaka dia asiana boribory iray, izay kosa miolikolika izany. Ny faribolana dia zaraina amin'ny tsipika marindrano; ny antsasaky ny ambony dia voalaza fa misolo tena ny tsy manam-pahaizana rehetra sy ny antsasaky ny elongelatra hita maso. Ny famantarana fito avy amin'ny homamiadana (♋︎) ka hatramin'ny capricorn (♑︎) eo ambanin'ny tsipika marindrano dia mifandraika amin'ny fisehoana niseho. Ny famantarana eo ambonin'ny tsipika marindrano antonony dia tandindon'ny tontolo tsy nitarika.
Ny tontolon'ny famantarana famantarana fito dia mizara ho an'izao tontolo izao na spheres izay, manomboka amin'ny ambany indrindra dia ny ara-batana, astral na psychic, ny saina ary ny tontolo ara-panahy na tontolo. Ireo tontolo ireo dia raisina avy amin'ny fomba tsy fandraisana andraikitra sy ny evolisiona. Ny tontolo voalohany na tontolon'ny fisiany voalohany dia ny ara-panahy, izay eo amin'ny làlana na amin'ny fiaramanidina, ny homamiadana-capricorn (♋︎-♑︎) ary amin'ny lafiny fandraisana andraikitra dia ny fofon'aina, homamiadana (♋︎). Ny manaraka dia izao tontolo izao, leo (♌︎); ny manaraka dia ny tontolon'ny endrika, virgo (♍︎); ary ny ambany indrindra dia ny tontolon'ny firaisana ara-nofo, libra (♎︎). Izany no drafitry ny fandraisana andraikitra. Ny famenoana sy fanatanterahana an'izao tontolo izao dia hita amin'ny lafiny fivoarany. Ny famantarana izay mifandraika sy manatanteraka ireo voalaza ireo dia scorpio (♏︎), sagittary (♐︎), ary capricorn (♑︎). Scorpio (♏︎), faniriana, dia fahatsarana tratra tamin'ny tontolon'ny endrika (♍︎-♏︎); eritreritra (♐︎), dia mifehy ny tontolon'ny fiainana (♌︎-♐︎); ary ny isam-batan’olona, ​​capricorn (♑︎), dia ny fahavitanana sy ny fahatanterahana ny fofonaina, izao tontolo izao ara-panahy (♋︎-♑︎). Ny tontolo ara-panahy, ara-tsaina sy astral dia ampitoviana sy mandanjalanja ao anatiny ary amin'ny alàlan'ny tontolo ara-batana, libra (♎︎).
Ny tany tsirairay dia samy manana ny zavaboariny izay mahalala ny fisian'izy ireo eo amin'ny tontolo manokana misy azy sy misy azy. Amin'ny tsy fandraisana andraikitra, ny zavatry ny tontolo fofonaina, ny an'ny fiainana, ny olona amin'ny endrika, ary ireo ao amin'ny tontolo ara-batana dia samy nahatsapa ny tontolony manokana, fa ny kilasy na karazana tsara teo amin'ny tontolony dia tsy nisy na tsy nahatsiaro tena. amin'ireo ao amin'ny tontolo hafa. Raha ny ohatra, ny olona tsy mihetsika ara-batana dia tsy mahatsapa ireo endrika astral izay ao anatiny sy manodidina azy, na ny toeran'ny fiainana iainany sy mamelona azy, na ny fofona ara-panahy manome azy toetra mampiavaka sy ao anatiny ary amin'ny alàlan'ny fahatanterahana azy dia tanteraka ho azy. Ireo tontolo sy fitsipika rehetra ireo dia ao anatiny sy manodidina ny olombelona vatana, satria ao anatiny sy manodidina ny tontolo vatana. Ny tanjon'ny fivoarana dia ny hoe izao tontolo izao sy ny fitsipiny manan-tsaina dia tokony hampitoviana sy hiasa am-tsaina amin'ny alàlan'ny vatan'ny olona, ​​ka ny olona ao anatin'ny vatany dia tokony hahatsapa ny fisehoan'izao tontolo izao rehetra ary afaka mihetsika am-tsaina amin'ny lafiny rehetra na amin'ny an'izao tontolo izao raha mbola eo amin'ny vatany. Mba hanaovana izany tsy tapaka sy tsy mitsahatra, ny olombelona dia tsy maintsy manamboatra vatana ho an'ny tenany tsirairay; ny vatana tsirairay avy dia tokony ho fananan'ny tontolo izay tokony hihetsika amim-pahakingana. Amin'izao vanim-potoan'ny fivoarana ankehitriny izao, ny olona dia manana ny fitsipika izay nomena anarana; izany hoe fofonaina ara-panahy izy amin'ny alàlan'ny fiainam-pitiavana amina endrika voafaritra ao anatin'ny vatany izay mihetsika ao amin'ny tontolo ara-batana. Nefa tsy mahalala afa-tsy ny vatany fotsiny izy, ary amin'ny tontolo ara-batana fotsiny satria tsy nanangana vatana maharitra na endriny maharitra ho azy izy. Fantany ny tontolo ara-batana sy ny vatany ankehitriny satria miasa ao amin'ny vatana vatana etsy sy eroa izy izao. Mahatsapa ny vatany ihany izy raha mbola maharitra ary tsy misy intsony; ary raha ny tontolo ara-batana sy ny vatana ara-batana dia tontolo iray sy vondron-tsetrika ary mandanjalanja, noho izany dia tsy afaka manangana vatana ara-batana maharitra mandritra ny fiovan'ny fotoana. Manohy mandrafitra vatana ara-batana hatrany izy amin'ny alàlan'ny fiainany maro izay iainany mandritra ny fotoana fohy, ary amin'ny fahafatesan'ny tsirairay dia misintona amin'ny toeran'ny torimaso izy na miala amin'ny endrik'izao tontolo izao na eo amin'ny tontolon'ny eritreritra tsy mitambatra ny fitsipiny ary nahita ny tenany. Tonga indray eo amin'ny ara-batana izy ary hanohy ny fiainana aorian'ny fiainana mandra-panorenany vatana na vatana hafa ankoatry ny ara-batana, izay ahafahany miaina miaina an-tsaina na ivelan'ny ara-batana.
Miaina amin'ny vatana ara-batana izao ny olombelona ary tsy mahalala afa-tsy ny tontolo ara-batana fotsiny. Amin'ny ho avy dia mbola hiaina vatana ara-batana ny olombelona amin'ny hoavy, fa ny lehilahy dia hitombo avy amin'ny tontolo ara-batana ary hahatsapa ny tontolo hafa rehefa manangana vatana na akanjo na akanjo izy ireo na amin'ny alàlan'izy ireo mety hihetsika amin'ireto tontolo izao.
Ny teny hoe adept, master ary mahatma dia maneho ny dingana na ny ambaratonga telo an'ny tontolo telo. Ireo dingana ireo dia voamarika arakaraka ny ambaratonga amin'ny alàlan'ny famantarana na mariky ny drafitra iraisan'ny zodiak.
Ny fahaiza-manavaka dia olona iray izay nianatra nampiasany ny fihetseham-po anatiny izay mitovy amin'ny fahatsapana ara-batana ary afaka mandray andraikitra amin'ny alàlan'ny fahatsapana anatiny ao anatin'ny tontolon'ny endrika sy ny faniriana. Ny fahasamihafana dia ny hoe ny olombelona dia miasa amin'ny fahitan'ny tontolo ara-batana ary mahita amin'ny alàlan'ny zavatra tsapany izay tsapa ho an'ny saina ara-batana, ny saina dia mampiasa fahatsapana fahitana, fandrenesana, fofonaana, manandrana ary mampihetsi-po azy amin'ny tontolon'ny endrika sy ny faniriany. ary raha tsy hita ny endrika sy ny faniriana ara-batana, dia afaka avy amin'ny fambolena sy fivoaran'ny toe-tsaina anatiny izy, hahatsapa sy hiatrehana ireo faniriana manao zavatra amin'ny alàlan'ny faniriana izay nanery ny vatana hanao zavatra. Ny adept toy ny fihetsika toy izany amin'ny vatana endrika mitovy amin'ny ara-batana, fa ny endrika dia fantatra hoe io dia araka ny toetrany sy ny haavon'ny faniriany ary fantatry ny olona rehetra izay afaka mihetsika amin'ny planeta astral. Izany hoe, tahaka ny olona rehetra manan-tsaina izay afaka milaza ny hazakaza sy ny laharana sy ny ambaratonga ara-kolontsain'olom-bitana hafa, toy izany koa ny olona mahay manavaka ny toetrany sy ny ambaratongam-pahalalana izay mety hihaona aminy ao anatin'ny tontolon'ny faniriana. Fa raha ny olona iray miaina ao amin'ny tontolo ara-batana dia mety hamitaka lehilahy iray hafa eo amin'ny tontolo ara-batana, toy ny an'ny firazanany sy ny toerany, tsy misy olona ao amin'ny tontolo fatra-pitiavana afaka mamitaka olona iray momba ny toetrany sy ny haavony. Amin'ny fiainana ara-batana, ny vatana ara-batana dia raisina amina endrika feno amin'ny endrika izay manome endrika, ary ity zavatra ara-batana ity dia ampiharina amin'ny faniriana. Amin'ny olombelona ara-batana dia miavaka sy voafaritra ny endrika fa tsy ny faniriana. Ny adety dia olona iray izay nanangana vatam-paniriana, izay vatam-paniriana dia mety hanao zavatra amin'ny alàlan'ny astral azy na amin'ny tenany ho vatana faniriana, izay nomeny endrika. Ny olon-tsotra amin'ny tontolo ara-batana dia manana faniriana be dia be, saingy io faniriana io dia hery jamba. Namolavola ny faniriana jamba ilay adeptaly ka tsy jamba intsony, fa manana fahatsapana mifanandrify amin'ireo an'ny endrika endrika, izay miasa amin'ny vatana ara-batana. Ny fahaiza-miaina, noho izany, dia olona iray izay nahatratra ny fampiasana sy ny fiasan'ny faniriany amin'ny vatana endrika iray tsy misy na tsy miankina amin'ny vatana ara-batana. Ny tontolon'ny tontolon'ny asa sy ny fiasa toy izao dia ny tontolon'ny fanjakan'ny astral na psychic, eo amin'ny sain'ny virgo-scorpio (♍︎-♏︎), ny faniriana, fa izy kosa miasa avy amin'ny teboka scorpio (♏︎). Nahita ny faniriana feno ny faniriana ny dokambarotra. Ny adept toy izany dia vatana faniriana miasa amin'ny endrika hafa ankoatra ny ara-batana. Ny toetra mampiavaka ny maharesy iray dia ny fijeriny zava-mitranga, toy ny famoronana endrika, ny fanovana ireo endrika, ny fiantsoana ireo endrika, ny fanerena ny fihetsika, ny rehetra dia voafehin'ny herin'ny faniriana, rehefa miasa izy amin'ny faniriana amin'ny endrika sy ny zava-misy eran'izao tontolo izao.
Ny tompo dia olona iray izay mifandraika sy mandanjalanja ny firaisana ara-nofo amin'ny vatan'ny vatana, izay naharesy ny faniriany sy ny momba ny tontolon'ny endrika ary izay mifehy sy mitantana ny tontolon'ny fiainana ao anaty fiaramanidina leo-sagittary (♌︎) —♐︎) amin'ny toerany sy amin'ny herin'ny eritreritra, sagittary (♐︎). Ny fahaiza-manavaka dia ny iray, noho ny herin'ny faniriana, dia nahavita hetsika maimaimpoana tao amin'ny tontolon'ny endrika-faniriana, misaraka sy tsy misaraka amin'ny vatana vatana. Ny tompo dia iray izay nahafehy ny filan'ny vatana, ny herin'ny faniriana, izay mifehy ny faran'ny fiainana, ary izay nanao izany tamin'ny herin'ny eritreritra avy tamin'ny toerany teo amin'ny tontolon'ny saina. Tompon'ny fiainana izy ary namorona vatana fisainana ary mety miaina amin'ity vatana mieritreritra izay mazava ary tsy afaka amin'ny faniriana sy vatana ara-batana, na dia mety miaina ao anatiny na miasa amin'ny alàlan'ny roa na izy roa. Ny lehilahy ara-batana dia mifampitady zavatra, mifampiraharaha amin'ny faniriana ilay dokam-barotra, miatrika hevitra ny tompony. Samy manao ny tontolony avy. Ny lehilahy ara-batana dia manana saina izay manintona azy amin'ny zavatry ny an'izao tontolo izao, ilay adala dia namindra ny sehatry ny asany nefa mbola manana fahatsapana mifanaraka amin'ny an'ny vatana; fa ny tompona dia nandresy ary nisondrotra mihoatra ireo foto-kevitry ny fiainana izay misy ny fahatsapana sy ny faniriana ary ny zavatra hita tarehiny. Satria ny zavamaniry dia ao amin'ny tontolo ary ny faniriana dia ao anatin'ny tontolo izao. Eo amin'ny tontolon'ny saina ara-tsaina ny lohahevitra hoe inona ny faniriana ao amin'ny tontolo endrika sy ny zavatra hita ao amin'ny tontolo ara-batana. Raha mahita ny faniriana sy endrika tsy hita maso ny olona ara-batana ny manan-tsaina, dia toy izany koa no ahitan'ny tompony sy mijery ny eritreritra sy ny idealy izay tsy takatry ny adino, fa izay mety ho voasariky ny adbé mitovy amin'ny fomba izay ahitan'ny olona ara-batana ny faniriana ary endrika izay tsy ara-batana. Raha ny faniriana dia tsy mampiavaka azy amin'ny endrika ara-batana, fa toy izany koa amin'ny fahaiza-manavaka, ka ny fiheverana adept dia tsy miavaka, fa ny fiheverana dia vatana tsy manam-paharoa ho an'ny tompony. Satria ny fananana adiresy dia manana baiko feno sy fanatanterahana ny faniriana ankoatry ny tsy ananan'ny olona ara-batana, dia toy izany koa ny tompona manana hetsika feno sy maimaimpoana sy herin'ny eritreritra ao anaty vondron-tsaina izay tsy mbola adika. Ny mampiavaka ny tompony dia ny fiheverany ny fiainana sy ny hetahetan'ny fiainana. Izy no mitarika sy mifehy ny fiainam-piainan'ny fiainana araka ny idealy. Miasa amin'ny fiainana ho toy ny tompon'ny fiainana izy, ao amin'ny vatana mieritreritra ary amin'ny herin'ny fisainana.
Ny mahatma dia iray izay nandresy, nivelatra, niaina ary niainga ambonin'ny tontolon'ny firaisan'ny olombelona ara-nofo, ny tontolon'ny fanirian'ny adept, ny tontolon'ny fisainan'ny tompo ary mihetsika an-kalalahana ao amin'ny tontolo ara-panahy. amin'ny maha-olona mahatsiaro tena sy tsy mety maty anao, manana ny zo tsy ho afaka tanteraka ary tsy hisaraka na mifandray amin'ny alàlan'ny fisainana, ny faniriana ary ny vatana vatana. Ny mahatma no fahatanterahana sy fahavitan'ny fivoarana. Ny rivotra rivotra dia ny fiandohan'ny firotsahan'ny tontolo hita maso ho an'ny fanabeazana sy ny fahatanterahana ny saina. Ny maha-olombelona dia ny faran'ny fivoarana sy fahatanterahana ny saina. Ny mahatma dia fivoarana feno sy tanteraka amin'ny isam-batan’olona na saina, izay manamarika ny fiafarany sy ny fanatanterahana ny fivoarana.
Ny mahatma dia saina tsy miankina amin'ny ilana fifandraisana bebe kokoa amin'ny an'izao tontolo izao ambany noho ny tontolo fofon'aina ara-panahy. Ny mahatanty dia mifoka rivotra araka ny lalàna izay itomanan'ny zava-drehetra ho fisehoana avy amin'izao rehetra izao tsy manam-petra, ary izay no nampisy ny zava-drehetra hita ao anatiny. Ny mahatalala dia miresaka momba ny hevitra, ny fahamarinan'ny mandrakizay, ny zava-misy amin'ny idealy, ary arakaraka ny fisehoan'ny tontolon'ny tsikitsiky. Amin'ny maha zavatra sy firaisana ara-nofo amin'ny tontolo ara-batana, sy ny saina ao amin'ny tontolon'ny faniriana, sy filana ao amin'ny tontolo eritreritra, mahatonga fihetsika ataon'ireo olom-boafidy any amin'ireny tontolo ireny, dia toy izany koa ny hevitra momba ny lalàna mandrakizay mifanaraka amin'izany ary amin'ny alàlan'ny fahatsiarovana ny mahatmas amin'ny asa ara-panahy izao tontolo izao fofonaina.
Ny adept dia tsy manafaka amin'ny reincarnation satria tsy naharesy ny faniriana ary tsy navahana tamin'ny virgo sy scorpio. Ny tompona iray dia naharesy ny faniriana, saingy mety tsy ho afaka amin'ny fanajana ny fahaleovan-tena satria satria nahafehy ny vatany sy ny faniriany izy dia mety tsy ho nahavita niasa ny karma nifandray tamin'ny eritreriny sy ny zavatra nataony taloha ary tsy azo atao izany. Izy hiasa ao amin'ny vatany misy ny karma rehetra izay noforoniny taloha, dia tsy maintsy anjarany izy hamorona vatana sy toe-batana be dia be, raha ilaina ny hamoahany tanteraka ny karma. amin'ny lalàna. A mahatma dia hafa noho ny masiaka sy ny tompony ao fa ilay adino dia mbola mila miverina ihany koa satria mbola manao karma izy, ary ny tompona dia tsy maintsy miverina amin'ny laoniny satria, na dia tsy manao karma intsony izy dia manatanteraka izay efa nataony, fa ny mahatma, rehefa nitsahatra nanao karma ary rehefa nahavita ny karma rehetra, dia navahana tanteraka amin'ny filàna rehetra mba hahalavorary. Ny hevitry ny teny mahatma no mahatonga izany. Ma manas manas, ny saina. Ma no saina sy saina tsirairay, fa ny mahatakatra ihany no foto-pisainan'ny saina. Ma, ny saina an'olon-tsotra, dia miasa ao anatin'ny mahatakatra, ny foto-kevitra manerantany. Io fotokevitra niandalana io dia ahitana izao rehetra izao hita maso sy ireo tontolony. Ma no foto-kevitry ny saina izay tsy mitovy amin'ny tsirairay, na dia anaty ny fahatapahan'izao rehetra izao aza; fa ma tsy maintsy lasa lavorary tanteraka, izay tsy eo am-piandohana. Tany am-piandohana ny ma, ny saina dia mihetsika avy amin'ny tontolo ara-panahy fofonaina amin'ny homamiadana famantarana (♋︎), ny fofonaina, ary mbola mijanona mandrapahafaty amin'ny alàlan'ny tsy fandraisana andraikitra sy ny fampivoarana ny fitsipi-pinoana hafa. ), ny tontolo ara-nofo momba ny firaisana ara-nofo, izay manondro ireo fitsipika hafa ilaina amin'ny fampandrosoana sy ny fahatanterahana ny saina no hivoatra. Ny ma na ny saina dia mihetsika ao anatin'ny saina ao an-tsaina ary amin'ny fivoarana rehetra amin'ny alàlan'ny fitrandrahana sy ny fivoarana mandra-pipoitra sy miakatra fiaramanidina amin'ny alàlan'ny fiaramanidina, eran'izao tontolo izao, mankany amin'ny fiaramanidina amin'ny haingam-pandeha mifanaraka amin'ny fiaramanidina izay niandohany tamin'ny manidina arc. Tao amin'ny kansera (♋︎) no niaviany; ny teboka farany ambany dia ny libra (♎︎); nanomboka teo ny fiakarana azy ary niakatra ho any amin'ny capricorn (♑︎), izay fiafaran'ny diany ary io no fiaramanidina iray nidinany. Izy no ma, ny saina, tamin'ny fanombohana ny tsy fandraisana andraikitra amin'ny homamiadana (♋︎); dia ma, ny saina, any amin'ny faran'ny fivoarana amin'ny capricorn (♑︎). Fa ny ma sendra nandalo teto mahat, ka mahatakatra-ma. Izany hoe, ny saina dia nandalo tamin'ny lafiny rehetra sy ny ambaratonga rehetra ao an-tsaina, mahatakatra, ary miray aminy ary miaraka amin'izany dia nahavita ny maha-izy azy manontolo, noho izany, mahatakatra.